Louis van Gaal oo difaacay Ronald Koeman iyo Frenkie de Jong, ” Ajaanibta mar walbo waala eedeeyaa | Dalkaan.com
Home ciyaaraha Louis van Gaal oo difaacay Ronald Koeman iyo Frenkie de Jong, ”...
Louis van Gaal oo difaacay Ronald Koeman iyo Frenkie de Jong, ” Ajaanibta mar walbo waala eedeeyaa
Louis van Gaal ayaa difaacay tababaraha Barcelona Ronald Koeman iyo ciyaaryahanka khadka dhexe Frenkie de Jong isagoo ku andacoonaya in ajaanibta mar walba lagu eedeeyo dhibaatooyinka kooxda.
Waxay u muuqatay in Koeman uu qarka u saarnaa in la ceyriyo ka hor guuldarradii 2-0 ee Barca ka soo gaartay Atletico Madrid 2dii Oktoobar iyo guuldaradii 3-0 ee Champions League ee ka soo gaartay Benfica.
Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne Joan Laporta ayaa doortay inuu garab istaago tababarihii hore ee Everton madaama uu qiray inay adag tahay maareynta dhibaatooyinka dhaawacyada iyo luminta Lionel Messi xilli ay jirto xiisadda dhaqaale ee kooxda.
Ciyaaryahanka khadka dhexe De Jong ayaa u dhaqaaqay inuu difaaco kooxdiisa maalmihii u dambeeyay, isagoo ku adkeystay in arrimaha kooxda “aad loo buunbuuniyey” iyo in xilli ciyaareedkoodu uu ka fog yahay in la kala diro.
Tababaraha Netherlands Van Gaal ayaa qaaday laba horyaal oo LaLiga ah, Copa del Rey iyo UEFA Super Cup markii ugu horreysay ee uu tababare u noqdo Barca, laakiin wuxuu u adkaystay xiriir adag oo uu la lahaa ciyaartoydii iyo taageerayaashii Camp Nou.
Isagoo hadlayay ka hor kulanka Oranje ee isreebreebka Koobka Adduunka ee Gibraltar, Van Gaal ayaa sheegay inuusan la yaabin inuu arko dadka ay isku dalka yihiin oo la dhaleeceynayo.
Previous articleBenzema oo loo magacaabay Xidiga Ciyaarta ee final-ka UEFA Nations League
Next articleGuudlaawe oo xilal ka qaadis iyo magacaabis sameeyey
DEG DEG: Senator-kii labaad oo lagu doortay Afisyoone
dalkaan_2ujpzr - September 29, 2021 0
Muqdisho (Caasimada Online) – Doorashada xubnaha kuraasta gobollada waqooyi ee Somaliland oo maanta si rasmi ah uga billaabatay xerada teendhada Afisyoone ee magaalada Muqdisho,...
Maxay Jaamacada Carabta ka tiri go’aankii ICJ?
Axmed Macallin Fiqi oo iska casilay xilka wasiirka amniga GALMUDUG +...
Andros Townsend oo ka hadlay Sababta uu u Sameeyay dabaaldegga Cristiano...
Daawo: Xildhibaan Canab oo shaacisay arrin ka dambeysa raafka ka socda...
Guudlaawe oo sameeyey ballanqaad ku aadan doorashada Golaha Shacabka
Xildhibaan reer Somaliland ah oo dhagax lagu dhaawacay
Fariintii adkeyd ee Cristiano Ronaldo uu diray kadib markii uu goolka...